Onye na -emepụta crane na ụlọ ahịa ụlọ ahịa ala China. Daxin
Igwe okwu ụlọ ala dị mma maka njikwa ụlọ nkwakọba ihe na ụlọ ahịa ndozi ụgbọ ala dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji ya bulie injin ahụ. Ihe mkpuchi ụgbọ ala anyị dị mfe ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ, ma nwee ike ịgagharị n'enweghị nsogbu na gburugburu ọrụ mkpagide. Batrị siri ike nwere ike ịkwado ọrụ otu ụbọchị.
Ogologo Ogologo Elu: 2220mm*3350mm
Ike iche: 650-1000 n'arọ
Max Crane gbatịkwuru: 813mm-1200mm
Mbupu oke osimiri LCL n'efu dị n'ọdụ ụgbọ mmiri ụfọdụ
Atụmatụ & Nchedo Nchedo
Enwere ike iji Cranes ụlọ ahịa ala n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Igwe igwe nwere nnukwu ibu na-adịkwa mfe ịrụ ọrụ. Mini Crane nwere ike bulie ihe dị arọ ngwa ngwa wee hapụ aka onye ọrụ. Ekwentị mkpanaka mkpanaka nwere batrị siri ike, ị nwere ike were ya rụọ ọrụ na ebe dị iche iche. E jiri ya tụnyere igwe eletriki eletrik, kreenu na -agbanwe agbanwe mgbe ọ na -arụ ọrụ n'ime ụlọ. Na mgbakwunye na ngwaahịa a, anyị nwekwara ọtụtụ ngwaahịa eji na mmepụta na ndụ, nke nwere ike ime ka ọrụ anyị dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaahịa dị oke mma, biko zitere anyị ajụjụ maka nkọwa ndị ọzọ akọwapụtara, anyị na -eche gị.
Ajụjụ, kedu ikike kacha amị nke klọọkụ ụlọ a?
A: Mgbe kranụ na -eji naanị otu ọrịre na -arụ ọrụ, kreenụ hydraulic nwere ike ibu otu tọn. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa pụrụ iche, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị iji hazie ya maka gị.
Ajụjụ, Isi isi ọ nwere ọrụ ntụgharị?
A ： N'ezie, enwere ike ịhazi nnukwu mbuli elu na -agbanwe agbanwe ka ị meziwanye arụmọrụ ọrụ.
Ajụjụ: Kedu ozi m ga -agwa gị mgbe m chọrọ ị nweta ọnụego?
A ： Ka m wee nye gị ọrụ ka mma na nke ziri ezi karị, ịkwesịrị ịnye m ogo na -ebuli elu, ike, na mpaghara ntụgharị ogwe aka kachasị mkpa.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka krens ụlọ ahịa na -arụ ọrụ?
A ： N'okpuru ọnọdụ ọrụ nkịtị, igwe mkpanaaka nwere ike ịrụ ọrụ otu ụbọchị ma ọ bụ karịa.
Otu n'ime ndị ahịa anyị si n'ụlọ ahịa na -arụzi ụgbọ ala America zụrụ Crane Shop Crane anyị iji buru ụfọdụ akụkụ akpaaka dị arọ n'ọmụmụ ihe ahụ.
Na mkparịta ụka ya na Jerry, ọ gwara anyị na ọ dị mma iji. O nweghị aka iji ebu ngwa dị arọ ma ọlị, na -azọpụta nnukwu mbọ, na n'ihi na ịdị mma anyị dị oke mma, o kpebiri ịnọgide na -azụrụ otu n'ime anyị Floor Plate 2 Post Car Lift ka a na -eji arụzi ala ala ya nke ọma. ụgbọ ala. Echere m na Jerry ga -aga n'ihu na -akwado anyị, ma nwedịrị ike bụrụ ezi enyi anyị.
Otu n'ime ndị ahịa anyị Australia zụtara kreenu ala maka ijikwa ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'ihi na ngwaahịa anyị nwere ezigbo mma, Tom na ndị ọrụ ya amatala ha. Mgbe ọtụtụ mkparịta ụka gachara, ha kpebiri ịzụrụ ọtụtụ kranes ma tinye akwụkwọ maka asambodo ntozu iji bụrụ onye na -ere ahịa anyị na Australia. Daalụ Tom nke ukwuu maka ntụkwasị obi ya na ngwaahịa anyị. Anyị ga -enye ọrụ ka mma na nkwado mkpọsa.
Ogologo Ogologo Elu
Max Ogologo agbatịkwu krane
Max ogologo ụkwụ gbatịrị
Ogologo 1220 mm
Ụkwụ na -agbanwe agbanwe
Nko na agbụ
Ike mgba ọkụ
Nke gara aga: Ibugharị ụgbọ ala Scissor Car
Osote: Agụụ Glass Lifter
1. Ihe mkpuchi ụlọ ahịa zuru oke (ike ikuku & ike mbubata) maka ibu ibu ngwa ngwa, dị mfe, na enweghị nsogbu.
2.24V DC mbanye na ebuli moto na-ejikwa ọrụ dị oke mkpa.
Njikwa aka ergonomic na-arụ ọrụ dị mfe iji rụọ ọrụ yana mmezi na-enweghị ngwụcha nke ọsọ na-aga n'ihu ma na-atụgharị, njikwa mbuli/mgbada, nchekwa nchekwa na-akwalite ọrụ ntụgharị mberede na mpi.
3. Na-agụnye breeki diski electromagnetic nwere njirimara mmadụ nwụrụ anwụ na-arụ ọrụ mgbe onye ọrụ wepụtara aka ahụ.
4.Kranụ ụlọ ahịa nwere ike nwere 12V, 80 - 95/Ah na -ebute batrị okirikiri miri emi, chaja batrị, yana nlele ọkwa batrị.
5.Poly-on-steel steer na wiil ibu.
Ọrụ awa 6.3-4 na ụgwọ zuru oke-awa 8 mgbe ejiri ya nwa oge. Gụnyere nko siri ike nwere mkpọchi nchekwa
1. valvụ na-agbawa agbawa: chekwaa ọkpọkọ hydraulic, mgbapu mmiri mgbochi mmiri.
2. Spillover valve: Ọ nwere ike igbochi nrụgide dị elu mgbe igwe na -agbago. Gbanwee nrụgide.
3. valvụ mbelata ihe mberede: ọ nwere ike gbadata mgbe ị zutere ihe mberede ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ.
Ọnụahịa kreenu ala
Ọnụahịa ụlọ ahịa kredit
Ọnụ ego Garage Crane
Ụlọ ahịa kreenụ
Obere ego kreenu